Chikumbaridzo chekusingaperi: "Neimwe nzira: nyaya yedu tose" | Current Literature
John Ortiz | 15/11/2021 15:15 | Biography, Mabhuku, Novela
Quote naKen Follett.
Chikumbaridzo chekusingaperi inhoroondo yemazuva ano yenganonyorwa nemunyori wekuBritain akahwina mubairo Ken Follett. Yakaburitswa munaGunyana 2014 uye ndiyo chikamu chechitatu che Trilogy yezana remakore, iyo inowedzerwa ne Kudonha kwehofori (2010) uye Nguva yechando chenyika (2012). Pachiitiko ichi, varatidziri vazukuru vevatambi vakuru vemazita apfuura musaga.
Mune iyi trilogy, munyori anopa nhoroondo yemhuri shanu dzemarudzi akasiyana uye kuti dzinobatwa sei Kupfuura nezvizvarwa— kubudikidza zviitiko zvakasiyana-siyana zvenhoroondo. Muna ikoku, Follett anotsinhira, kuti: “Iyi inhau yasekuru nasekuru vangu neyenyu, vabereki vedu noupenyu hwedu timene. Neimwe nzira inyaya yedu tese ”.
1 Pfupiso yeThe Threshold of Eternity
1.1 Nyaya inotanga
1.3 MuUnited States
1.6 Mamiriro echokwadi
3 Nezve munyori, Ken Follett
3.1 Basa reunyanzvi
3.2 Mabhuku ekunyora
3.3 Inoshanda naKen Follert
Pfupiso ye Chikumbaridzo chekusingaperi
Iyo inoverengeka inotanga muna 1961, makore 16 pashure pokupera kweHondo Yenyika II. Tiri kutaura nezvenguva apo masimba makuru akatora mukana - pakati pavo, Russia, nyika huru muSoviet Union. Vanhu vekuRussia vakaisa dzidziso yavo yechikomonisiti munharaunda yese kusvika vasvika kuGermany, izvo zvakaita kuti maGerman vatange kusiya nyika yavo.
Ichi chikamu chinoisa nyeredzi Rebeka, mudzidzisi weEast German wemhuri yaFranck - muzukuru waLady Maud - uyo rimwe zuva vakagamuchira subpoena kubva kuStasi - mapurisa epachivande eGerman Democratic Republic (GDR) -. Izvi zvakabva zvamushamisa nekuti aisaziva zvikonzero zvekuraira. Zvisinei, akaramba achipinda pazuva rakanga rataurwa. Pane imwe nzvimbo, aibvunzwa mibvunzo yaimupedza simba.
Mushure mekududzirwa kwakashata, Rebeka Aida kubva kudzimbahwe reStasi nokukurumidza, asi akamhanyira kumurume wake Hans. Panguva iyoyo mukadzi akazviziva murume akamunyenga muwanano yose. Iye akanga ari lieutenant weStasi uye aingomuroora kuti asore mhuri yake.
Pakunzwa zvese, Ribheka akaedza kutiza muguta, asi akakonewa, sezvo kubuda kwake kwakabatana nemutemo wakashata kubva kuhurumende yeGDR. Vakanga vasarudza kupatsanura "maGermany maviri" kuitira kumisa kubhururuka kwevanyanzvi kubva munyika. Kubva panguva iyoyo kuvakwa kweWall Berlin ine mukurumbira wakashata kwakatanga, uye Rebecca akabatwa musungo uye akaparadzaniswa nevamwe, pamwe chete nemazana ezviuru zvevaGermany kumativi ose.
Panguva idzodzo, kune rumwe rutivi rwenyika akanga ari George jakes Mwanakomana waGreg Peshkov-, murume wechidiki akashanda segweta mukutonga kwaMutungamiri John F. Kennedy. Uyezve, yakanga iri murwiri wekodzero dzevanhu of the african american muUS Kurwira kwake kwakamuita kuti atore chikamu mukuratidzira kumaodzanyemba kwenyika uye kuenda kufora kwaitungamirwa naMartin Luther King kuWashington.
Ken Follett anotora mazwi.
George akanga achishanda pakuumbwa kwemutemo wekodzero dzakaenzana. Nekudaro, izvo zvakarasikirwa nezvazvinoreva kana Kennedy aurayiwa. Makore akati gare gare, akatanga kushanda pamwe chete naBobby Kennedy, kunyange zvazvo zvirongwa zvake zvakaparara zvakare apo murume uyu akapondwawo.
Dave Williams Ndiye protagonist wenhoroondo munharaunda ino yeEurope. Ari ipapo, akakwanisa kufungisisa nokunetseka kusawirirana kwemamwe makondinendi maviri. Murume wechidiki aishuva kuva muimbi uye achiumba bhendi rerock neshamwari dzake. Paakangobudirira, akashandisa nziyo dzacho kuratidza maonero ake pamusoro pokushayikwa kworusununguko nokusaruramisira.
Kutenda kubudirira yeboka, vakaenda kuAmerican continent. Kuvepo Dave nevamwe vake vebhendi akagara muSan Francisco uye akabatanidzwa zvakasimba mumavambo esangano remahippie -Iyezvino inotungamirwa nevadiki vekuAmerica vachiratidzira kupera kweHondo yeVietnam.
Mamiriro ezvematongerwo enyika muSoviet Union ayo Follett anotiratidza haasi nyore zvachose. Munyori anoisa muverengi mushure mekufa kwaKhrushchev uye Brezhnev kutora simba. Hondo Yemashoko yakapisa ndokuparadza nheyo dzechivako icho panguva iyoyo chairangarirwa kuva chisingaparadzwi. Nekuda kwake, muRussia, Gorbachev akaedza kuchengetedza hupfumi hwenyika nehurongwa hwePerestroika, asi kuedza kwake kwakashaya basa.
Pasi panorama iyi, vatsigiri vechikamu ichi vanoonekwa: mapatya Dimka naTania. The, nhengo yebato rechidiki communist, nyeredzi iri kubuda yekufamba; siwe hanzvadzi, one murwi wokumukira. Nekuda kweizvo zvataurwa, kuratidzira kwakawedzera - pamwe chete nematanho akaipa akatorwa nehurumende - izvo zvakawedzera kuwa kwecommunism.
Mushure mezvose izvi zvakatevedzana zviitiko, pakupedzisira, pana November 11, 1989, Rusvingo rweBerlin rwakaputswa.
Nyaya inoitika pakati pemakore 1961 na1989 —Mukukura kuzere kweHondo Yemashoko. Chimiro chega chega chinoenda kuburikidza nehondo yakazvimirira. Nyika inosangana nenguva dzakaoma umo masimba makuru anorwira zvido zvavo pasina kufunga nezvemigumisiro yezviito zvavo.
Chikumbaridzo chekusingaperi iri novel by Nhoroondo yenganonyorwa. Inokura kwese 10 zvikamu izvo zvinozopatsanurwa kuita zvitsauko uye izvo zvinowedzera zvimwe Mapeji 1152. Basa iri inorondedzerwa nenzira yemutsara nemutauri wenyaya anoziva zvese anoshandisa mutauro wakapfava uye unovaraidza — hunhu hwakakudziridzwa naFollett mubasa rake refu uye hunobata muverengi nekukasika, kunyangwe vasina kumboverenga munyori.
Nezve munyori, Ken Follett
Kenneth Martin Follett - Ken Follet - akaberekwa musi waChikumi 5, 1949 muCardiff, guta guru reWales. Vabereki vake vaiva Veenie naMartin Follet. Kusvikira ava nemakore 10 okuberekwa aigara mutaundi rokumusha kwake, uye ipapo akatamira London. On 1967, akatanga kudzidza uzivi paUniversity College yeLondon, rudzi kuti yakapera makore matatu gare gare.
Muna 1970, akatora kosi yezvenhau kwemwedzi mitatu, izvo zvakaita kuti shanda semutori wenhau kwemakore matatu MaSouth Wales Echo, muCardiff. Mushure mezvo, akadzokera kuLondon, kwaakashanda kuhofisi EveningStandard. Mukupera kwema70s, akaisa utori venhau parutivi uye akazembera mukutsikisa, uye akave mutevedzeri wemukuru wemanejimendi eEverest Book.
Akatanga kunyora nyaya sechido chekutandara, zvisinei, hupenyu hwake hwakashanduka nekuburitswa kwe Ziso retsono (1978), novel yake yokutanga. Nekuda kwebhuku iri, akawana Mubairo weEdgar, pamusoro pekuzivikanwa pasi rese. Imwe hits yake yakauya muna 1989 na Mbiru dzenyika, basa raakatora naro nzvimbo dzekutanga dzekutengesa muEurope kweanopfuura makore gumi.
Muhupenyu hwake hwese akaburitsa zvinyorwa makumi maviri nemaviri munhoroondo uye mhando dzekufungidzira. Vanomira pakati pavo. Mumuromo meshato (1998), Ndege yekupedzisira (2002), Nyika isingaperi (2007) uye Iyo Century Trilogy (2010). Pamabhuku ake, manomwe akachinjirwa terevhizheni nemabhaisikopo, pamusoro pekupihwa mibairo yakakosha, yakadai se: Bancarella Prize (7) uye International Thriller Writers Awards (1999).
Inoshanda naKen Follert
The Island of Storms kana Ziso retsono (1978)
Murume anobva kuSt (1982)
Mapapiro egondo (1983)
Mupata weshumba (1986)
Mbiru dzenyika (1989)
Husiku pamusoro pemvura (1991)
Mari ine njodzi (1993)
Nzvimbo inonzi rusununguko (1995)
Wechipiri mapatya (1997)
Mumuromo meshato (1998)
Double mutambo (2000)
Ngozi yakanyanya (2001)
Ndege yekupedzisira (2002)
Nyika isingaperi (2007)
Iyo Century Trilogy
Kudonha kwehofori (2010)
Nguva yechando chenyika (2012)
Chikumbaridzo chekusingaperi (2014)
Mbiru yemoto (2017)
Rima nemambakwedza (2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Chikumbaridzo chekusingaperi
Jacinta Cremades. Hurukuro nemunyori weReturn to Paris